Lithium-Ion Shirkadaha Soosaarayaasha Battery Forklift | LifePo4 AGV Forklift Xidhmada Bateriga
Waan kula soo xiriiri doonaa
Geli macluumaadkaaga iyo waxa looga baahan yahay, waxaanu dib kuugu soo diri doonaa dhawaan.
Ama iimayl: [emailka waa la ilaaliyay]
R&D & Waxsoosaarka
12 Volt lithium ion AGV/AMR batari
24 Volt lithium ion forklift baytari baabuur
36 Volt lithium ion forklift baytari baabuur
48 Volt lithium ion forklift baytari baabuur
60 Volt lithium ion forklift baytari baabuur
72 Volt lithium ion forklift baytari baabuur
80 Volt lithium ion forklift baytari baabuur
96 Volt lithium ion forklift baytari baabuur
120 Volt lithium ion forklift baytari baabuur
Battery Forklift la habeeyey
Faa'iidada Batteriga Forklift LiFePO4
Waa maxay sababta ay u dooratay baytariyada JB BATTERY LiFePO4
Farqiga udhaxeya LiFePO4 iyo Asiidhka-lead
Waxqabadka Sare Battery Forklift
Faa'iidada BATTERY-ga JB
Korantada saxda ah ee baytariga fargeetada
U dooro baytari LiFePO4 Forklift kaaga
Dooro Battery Forklift Midig
Codsiga baytariga LiFePO4 ee AGV
Fasalada Forklift Trucks
Korontada Forklift Battery
Battery Forklift-ka culus
Bateriga Farklift ee Jidka Cidhiidhiga ah
Battery Platform Shaqada Hawada
Bateriga Atoomatiga ah ee Hagaya (AGV).
Kiis Maraykan ah
Kiiska Koonfur Afrika
Kiis ku yaal Israa'iil
HADA NOO SOO wac
CALAAMADAHA Batariyada Forklift Truck Bateriga LiFePO4 GUDAHA Kor u qaad qaadkaaga Waxtarka Tamarta
BATTERY FARKLIFT OO XIRFAD LEH · In ka badan oo la isku halleyn karo & ammaan badan
· Ka xoog badan oo waara LIFEPO4 unugyada baytariyada
Batariyada Forklift ee ka yimid BATTERY JB
Waxtarka tamarta weyn macnaheedu waa kharash yar iyo qiiqa hoose oo hooseeya.
Ka dhig fargeetoyadaada inay u shaqeeyaan si wax ku ool ah oo hufan intii ay awoodaan.
Badbaadada iyo fayoobaantu waa qaybo muhiim ah oo ka mid ah hawlgal kasta oo lagu guulaysto fargeeto.
Baytariyada lithium-ion ee JB BATTERY waxay bixin karaan hufnaan iyo waxqabad sare.
Soo saaraha Battery Forklift
Waxaan si gaar ah u bixinaa baytariyada lithium iron Phosphate (LiFePO4) oo ballaaran oo loogu talagalay gawaarida fargeetada korontada, mid walbana si gaar ah ayaa loogu farsameeyay si uu u bixiyo nolol wareeg ah oo sareysa iyo waxqabad heer sare ah oo heerkul ballaaran oo shaqeynaya.
U hoggaansanaanta istaraatiijiyad horumarineed oo tayo sare leh, JB BATTERY waxay sii wadaa inay diiradda saarto tignoolajiyada baytariyada lithium-ka sare iyo alaabta, waxay leedahay tignoolajiyada asaasiga ah ee baytariyada lithium iyo nidaamka kaydinta tamarta.
Batari JB ah oo soo saara noocyo kala duwan oo batari lithium ion forklift iyo tilmaamo, Voltage leh 12V, 24V, 36V, 48V, 60V,72V, 80V 96V 120 volt iyo fursadaha awoodda leh 100ah 200Ah 300Ah 400Ah500Ah600Ah700Ah800Ah900
BATTERY JB LiFePO4 Warshada baytariyada Forklift
Waa markii aad ku beddeli lahayd maraakiibtaada adigoo isticmaalaya waqti dheer, dallacasho degdeg ah, ka xoog badan oo tamar badan oo ka hufan BATTERY.
Baytariyadayada LiFePO4 waa xalka ugu fiican ee dayactir la'aanta ah ee qalabka maaraynta, kaas oo kordhin doona wax soo saarkaaga shaqada, iyada oo hoos u dhigi doonta dayactirka batteriga iyo kharashka batteriga si weyn.
Batari lithium wareeg ah oo qoto dheer ee baabuurta fargeetada ah
24V LiFePO4 baytari jiidashada
36V LiFePO4 baytari jiidashada
48V LiFePO4 baytari jiidashada
80V LiFePO4 baytari jiidashada
120V LiFePO4 baytari jiidashada
Xidhmada baytariga Forklift ee la habeeyay
Faa'iidada baytariyada forklift waxay sameeyaan BATTERY JB
Awood weyn oo jiidis ah
Waxaan bixinaa 120V 1440Ah qeexida baytariyada awooda sare leh ee xamuulka qaada ee culus.
Isticmaalka Tamarta oo Yar
Iska caabin hoose oo hoose iyo hufnaan sare, waxay la macno tahay turkiga foklift wuxuu leeyahay waqti aad u dheer.
Battery-cimilada oo dhan
Korontada JB BATTER LiFePO4 Waxay si aad u wanaagsan ugu shaqeysaa dhammaan xaaladaha cimilada - heerkul sare iyo mid hooseeya.
Waxaad ku shuban kartaa baytariyadayada LiFePO4 wakhti kasta - wakhtiga nasashada, wakhtiga qaxwada ama inta u dhaxaysa saacadaha shaqada.
Ma jiro shaqo maalinle ah oo dayactir ah iyo kharashyo, umana baahnid inaad mar dambe waraabiso batterigaaga.
BATTERY JB LiFePO4 baytariyada
120V 1750Ah LiFePO4 Xirmo Batari Fargeeto ah oo Culus, Sahayda Warshada, Tilmaamaha cusboonaysiinta forklift ee la isticmaalay, Nolosha meertada qoto dheer in ka badan 3000 jeer, Lithium birta phosphate baytariga
120V 1640Ah LiFePO4 Battery Forklift, BMS Intelligent BMS kaydinta tamarta qoto dheer LiFePO4 80V 96V 120V batari lithium-ion, saldhigga fargeeto korontada, cimri dheer
120V 1560Ah Lithium Batari Forklift ah oo culus, nolosha meertada>3000, cimriga dheer
96V 900Ah LiFePO4 Xidhmada batteriga Forklift ee Korontada, Batari fargeeto ah oo koronto tayo sare leh,72v 80v 96v 800ah 900ah 1000ah baytariga jiidashada, Xidhmada baytariga Lithium-ion
96V 850Ah Lithium-ion Electric Forklift Battery Pack, Warshada sahayda 700ah 800ah 900ah 1000ah nidaamka tamarta fargeeto ah oo habaysan 72V 80V 96V 120V LiFePO4
120V 1440Ah LiFePO4 Battery Forklift ah oo culus, ku dallacayn degdeg ah oo hufan ilaa 100% awoodda, Waxqabadka cimilada qabow ee heersare ah, baytariga birta ee lithium
96V 720Ah LiFePO4 Battery Forklift Koronto, Baytariyada dib La Celin karo
96V 650Ah Electric Forklift Battery, Lithium Forklift Battery OEM ODM Solutions, 72V 80V 96V 120V Fargeeto Koronto Shaabad Dib U Dajin Karta Lifepo4 Battery 500ah 600ah 700ah 800ah 900ah
96V 416Ah Electric Forklift Battery, Lithium ion batari forklift, 48V 72V 96V 120V 800ah 700ah 600ah 500ah 400ah 300ah warshadaha forklift lithium baytari
72V 850Ah LiFePO4 Xidhmada batteriga Forklift ee Korontada, baytari fosfateed birta Lithium, Dayactir la'aan, Nolosha dheer waxay meesha ka saaraysaa baahida batteriga beddelka, Lithium iron phosphate baytari
Blogs iyo Wararka
24V 200Ah Deep Cycle LiFePO4 Lithium Ion Battery Forklift Forklift Forklift Forklift Truck iyo AutoGuide Mobile AGM Robots
24V 200Ah Deep Cycle LiFePO4 Lithium Ion Forklift Battery Forklift Electric Forklift Truck iyo AutoGuide Mobile AGM Robots Erayga baytari lithium waa yara madmadow sababtoo ah waxaa jira kimistariyada baytariyada lithium kala duwan, mid walbana wuxuu leeyahay faa'iidooyin iyo khasaarooyin. Baytariyada lithium-ku waa kiimiko heersare ah sababtoo ah waa tamar-cufan oo qiimahoodu ka yar yahay halkii [...]
Faa'iidooyinka xirmada baytariyada forklift ee lithium-ion ee ka yimaada soosaarayaasha baytariga lithium-ion ee Shiinaha
Faa'iidooyinka xirmada baytariyada fargeetada ah ee lithium-ion ka soo saarayaasha baytariyada jiidista lithium-ion ee Shiinaha teknoolajiyada Lithium-ion ayaa wax badan ka soo roonaaday dhawaanahan. Koritaankiisa waxaa si weyn loogu tiriyaa kaydinta tamarta dib loo cusboonaysiin karo iyadoo qof kastaa uu raadinayo ikhtiyaarka ugu habboon uguna kalsoon ee laga heli karo suuqa. Meheraduhu waxay si dhakhso leh u qabsadeen oo qaateen lithium-ion […]
Shirkadaha batteriga ugu sarreeya ee 4 lithium ion forklift iyo alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha 2022
Shirkadaha batteriga ugu sarreeya ee ugu sarreeya ee lithium ion forklift ee Shiinaha 4 arrimuhu si tartiib tartiib ah ayey isu beddelayaan, teknoolojiyadda cusub ayaa suuqa soo galaysa si ay wax u fududeeyaan oo uga sii fiicnaadaan. Sababtoo ah soo bandhigida baytariyada lithium-ion, arrimuhu waxay noqdeen kuwo ku roon adduunka forklifts. Soo-saareyaasha iyo maamulayaasha waxay leeyihiin waqti sahlan […]
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato ku saabsan baytariyada Forklift koronto ee Shirkadaha Batroolka ee Lithium Forklift
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato ku saabsan baytariyada Forklift Korontada ee Shirkadaha baytariyada Lithium Forklift Waxay yiraahdeen macluumaadku waa awood. Tani waa run dhammaan warshadaha, iyada oo aan loo eegin inta ay le'eg yihiin ama yar yihiin. Marka la helo xogta saxda ah, waxay noqonaysaa mid aad u fudud in la sameeyo go'aamo xikmad leh oo ugu wanaagsan. Dunida forklift, […]
Codsiga baytariyada forklift-ga ah ee 7 nooc ee baytariga ku shaqeeya
Codsiga lithium-ion forklift Battery forklift 7 nooc oo batari ah maanta, helitaanka tamar la isku halayn karo oo ka shaqeysa deegaan kala duwan oo la heli karo mar walba waa suurtagal. Sababtu waxay tahay horumarka laga sameeyay dhanka farsamada iyo hagaajinta baytariyada lithium-ion. Heerarka baabuurta ee ugu wanaagsan […]
Immisa baytari fargeeto ah oo lithium-ion ah ayaa ku kacaya 7 nooc oo baytariyada forklift ah?
Immisa ayuu ku kacayaa batari fargeeto ah oo lithium-ion ah oo loogu talagalay 7 nooc oo kala duwan oo baytariyada forklift ah Warshadaha wax ka qabashada walxaha waa muhiim, waxayna u baahan yihiin hufnaan iyo wax soo saar. Tani waa habka kaliya ee ay ugu guuleysan karaan bakhaarada iyo xitaa dhirta wax soo saarka, waxaa muhiim ah in la helo habka ugu wanaagsan ee wax badan loo qabto [...]
Ku saabsan BATTERY JB
Warshada Battery ee JB OEM & ODM Warshadaha LifePo4 Lithium Ion Batariyada Batariyada, Sida Shirkadaha Soosaarayaasha Battery ee Lithium-Ion Forklift iyo LifePo4 AGV Forklift Battery Suppliers, Soo saarista Lithium Ion Forklift Battery Noocyo & Tilmaamo, Voltage leh 12V,24V,36V , 48V 60V 72 Volt iyo Awood Ikhtiyaar leh 80ah 96Ah 120Ah 100Ah 200Ah 300Ah 400Ah 500Ah 600Ah 700Ah and High.
Battery JB waa soo saaraha shiinaha ee LifePo4 lithium ion baytariyada forklift, xajiyeyaasha, iyo qalabyada loogu talagalay dhammaan noocyada baabuurta wiishka ee loo isticmaalo dhammaan warshadaha oo dhan. Waxaan soo saareynaa 12 volt AGV AMR.
Xuquuqda daabacaadda 2022 Huizhou JB Battery Technology Limited Dhammaan Xuquuqaha Way Dhawrsan Yihiin. Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah Khariidadda bogga
gaadhigii baa lagugu daray